आखिर कसले चलाउँदैछ यो मानव जीवन ! « Khabarhub
आखिर कसले चलाउँदैछ यो मानव जीवन !
जगतको निर्माणका लागि अचेतन तत्व प्रकृति र चेतन तत्व पुरुषको अकल्पित संयोग मान्ने सांख्य दर्शनलाई षड दर्शनमध्ये सबैभन्दा पुरानो, तुलनात्मक र तथ्यपरक मान्दै आएका छन् पूर्वीय दर्शनका विद्वानहरूले । यसैको आधारमा भौतिकवादले पनि सृष्टिसम्बन्धी विविध तर्क अघि सार्नु अन्यथा होइन ।
यसो भनिरहँदा भौतिकवादको व्याख्यानबाट अध्यात्म नकारिएको होइन । प्रस्तुत लेखमा आएका धर्म सम्बन्धी उदाहरणले गुढ अध्यात्मलाई नभई भ्रमपूर्वक चल्दै आएको लोक धर्मलाई जनाउनेछ । कल्पना एवम् भाग्यप्रति भन्दा श्रमप्रति विश्वास जगाउन लेख अभिप्रेरित छ ।
सृष्टि अघि बढाउने र पालन गर्ने क्रिया जोसुकैबाट भए पनि यो एक सक्रिय क्रियाशीलता हो । अदृश्य वस्तु वा तत्वले दृश्य जगत वा यसभित्रको निर्माण वा विनाशको अविछिन्नता कुन प्रक्रियाबाट अघि बढाउन सक्छ भन्ने कुरातिर लाग्ने हो भने यो बहस स्वयंमा एक दर्शनशास्त्र बन्न पुग्छ र विशाल ग्रन्थ नै बन्न सक्छ । त्यसकारण मजुदर र देवताको अति संक्षिप्त चर्चा गरौँ ।
सृष्टिका सूक्ष्म तत्वहरूको संयोगबाट दृष्य तथा स्थुल तत्व निर्माण गर्नु मजदुरी हो । निर्मित तत्वलाई मानवोपयोगी बनाउनु मजदुरीकै प्रतिफल हो । यसैगरी मानवोपयोगी तत्वलाई वितरणमा लैजानु पनि मजदुरी नै हो । वितरित तत्वको उपभोग्य क्षमता बढाउनु पनि मजदुरी हो । वस्तुको उपभोगपछि पुनः उत्पादन क्षमताको चक्र निर्माण गर्नु पनि मजदुरी नै हो ।
उपर्युक्त विषयहरूमा कल्पित अदृष्य देवताको प्रत्यक्ष योगदान रहेको मान्न सकिने आधार देखिँदैन । काल्पनिक संसारबाट प्रत्यक्ष जगतको अवलोकन हुने बित्तिकै विशिष्टीकृत मजदुरहरूको विशिष्ट योगदान रहेको अनुभव हुने गरेको देखिन्छ ।
हाम्रा लागि स्वतस्फूर्त प्रकृतिप्रदत्त हावा, पानी, आकाश, पृथ्वी, अग्निको विविध किसिमले गरिएको संयोजन नै मानव उपयोगिताको आधार हो । यही संयोजन, निर्माण तथा सम्बद्र्धनका लागि आवश्यक पर्ने शिल्पिहरू नै मजदुर हुन् ।
प्राकृतिक वस्तुहरूको समयसापेक्ष संयोजनबाट हुने मानवोपयोगी क्रियाकलापमा हरेक वर्ग, तह र सिपको जरुरत पर्छ । उपलब्ध प्राकृतिक वस्तुलाई मजदुरले उपयोगसिद्ध तुल्याउँछ सिप, ज्ञान र श्रमको आधारमा । त्यसैले उसको योगदान अदृश्य र काल्पनिक देवशक्तिभन्दा माथि रहन्छ ।
स्वार्थरहित मजदुरको मजदुरीबाट नै मानव कल्याणका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक वस्तुहरू समय सापेक्षरूपमा तयार हुन्छन् । त्यसैले मजदुरको मजदुरी काल्पनिक देवशक्तिभन्दा माथि रहन्छ ।
मजदुर श्रमको निरन्तर पूजा गर्छ र उत्पादनलाई निरन्तरता दिन्छ । मजदुरले कर्मको पूजा अक्षता र फूलपातीको सट्टा श्रमबाट गर्छ । कसले उत्पादन उपयोग गर्छ, त्यो उसलाई मतलब हुँदैन । ऊ त कसरी र कति परिमाणमा उत्पादित वस्तुको उपयोग हुन्छ भन्नेमै तल्लीन हुन्छ ।
त्यसैले मजदुर अदृष्य र काल्पनिक देवत्वभन्दा माथि रहेर मानवकल्याणमा प्रत्यक्ष समर्पित रहन्छ । कथित देवत्वबाट प्राप्त हुने वरदानको कथाभन्दा सिर्जना र निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने हुँदा मजदुर र मजदुरी नै देवताका रूपमा पूजित हुनुपर्ने हो, यथार्थ यही हो । जगत सञ्चालन गर्ने ‘मानव पारिस्थितिक सञ्जाल’ मा मजदुर एक अपरिहार्य तत्व हो ।
व्यावहारिक र भौतिक क्रियाकलापले नै विश्व चलेको छ र चलिरहनेछ । माटो स्वयंले घडा बनाउँदैन । जङ्गलका रूखहरू आफैँ फर्निचर बनेर गृह प्रवेश गर्दैनन् । अन्नको वीज स्वयं जमिनमा प्रवेश गरेर मानिसलाई पुग्ने गरी फसल दिँदैन । उद्योग आफैँ चल्दैन । कुनै पनि सडक देवताद्वारा निर्माण भएको छैन । यातायातको साधन आफैँ बनेका छैनन् र चलेका पनि छैनन् ।
कुलो, नहर, बाँध, पुल, जहाज, औषधि, अस्पताल, घर, मन्दिर, मूर्ति, कला, संस्कृति कसैले पनि देउता पुकारे बनाएका होइनन् । निर्माणका लागि बुद्धि, सिप र श्रमशीलता आवश्यकता पर्छ । पारस्परिक आश्रयको सिद्धान्तले सृष्टिको नियम चलेको छ ।
समस्त मानव कल्याणका लागि सबैभन्दा ठूला साधक बौद्धिक तथा श्रमिक मजदुर वर्ग नै हुन् । श्रमको यथोचित ज्याला र कामको नतिजा नै उनीहरूको कर्मफल हो । पूर्वजन्मको कमाइको भर पर्ने र आगामी जन्म सुधार्ने नाममा बौद्धिक र श्रमिक वर्ग कर्मशीलताबाट विमुख हुने हो भने धेरै मासिहरू भोकानाङ्गा हुनेछन् । त्यो बेला कुनै दैवीशक्ति प्रकट भएर मानवलाई बचाउन सक्नेछ भन्ने विश्वसनीय प्रमाण आजसम्म फेला परेको छैन ।
मजदुर दृष्यमान जगतको प्रत्यक्ष देवता हो । मजदुर भनेको मानवोपयोगी वस्तु उत्पादन र परिचालन गर्ने मानवीय शक्ति र क्षमतायुक्त महामानव हो । भ्रमको खेती मजदुरीमा चल्दैन । जति काम हुन्छ, यथार्थमा त्यति नै हुन्छ, विज्ञान सम्मत प्रमाणमा आधारित हुन्छ । काल्पनिक कथाले मनोरञ्जन देला तर जीवन चलाउने वस्तु दिँदैन ।
मन्दिको निर्माणशिल्पी मजदुर नै हुन्छ । मन्दिरभित्रको मूर्ति शिल्पकार वा मूर्तिकारकै मजदुरी हो । मन्दिरभित्रका भावनात्मक देवता मजदुरकै सहयोगमा विराजमान गराइन्छन् । खेती मजदुरले नै गर्छन् । उत्पादनको व्यवस्थापन उनैले गर्छन् । दयालु र कृपालु भनिएका देवता उत्पादन प्रक्रियामा संलग्न देखिँदैनन् ।
उपलब्ध प्राकृतिक वस्तुलाई मजदुरले उपयोगसिद्ध तुल्याउँछ । स्वार्थरहित मजदुरको मजदुरीबाटै मानव कल्याणका लागि भौतिक रूपमा आवश्यक पर्ने वस्तुहरू समय सापेक्षरूपमा तयार हुन्छन् । त्यसैले मजदुरको मजदुरीलाई अदृश्य र काल्पनिक देवशक्तिभन्दा माथि राख्न सकिन्छ ।
शिल्पकार तथा श्रमिक मजदुरले नै घर बनाउँछन्, महल बनाउँछन, दरबार बनाउँछन् तर त्यहाँभित्र तिनै मजदुरप्रति घृणाभाव राख्ने अमानुषको बाक्लो उपस्थिति हुन्छ । यिनीहरू आफ्नो आवासलाई ईश्वरको अनुकम्पा मान्न पनि पछि पर्दैनन् ।
जोखिमपूर्ण निर्माण कार्य मजदुरकै हातबाट सम्पन्न हुन्छन् । असम्भव देखिने कठोर संरचना बनाउने यिनकै शिल्पि हात तथा अटुट श्रम हो । देवताका रूपमा पूजित हुने विश्वकर्मा बाबा पनि मजदुर नै हुन् ।
यस्तो महिमा भए पनि मजदुरहरूको आर्थिक अवस्था तुलनात्मक रूपले कमजोर हुने गरेको छ । शैक्षिकस्तर समेत कमजोर हुन्छ । भित्री तथा बाहिरी सम्पर्क ज्यादातर आफूजस्तै मजदुरसँग हुन्छ । आफूलाई सभ्य ठान्ने वर्गले भन्ने गरेको सभ्यता, नीति, शिक्षा, सामाजिक विकास, अनुशासन इत्यादिको अभ्यास मजदुर वर्गले कमैमात्र गरेको हुन्छ । त्यसैले श्रमिक वर्गमा कथित सभ्यतामा पर्ने मिजास र व्यवहार कम हुन पुग्छ । यसै कारण आफूालाई सभ्य, सुसंस्कृति र उच्च वर्गको ठान्नेबाट मजदुरहरू हेपिन्छन् ।
शारीरिक श्रममात्र होइन, बौद्धिक श्रमको पनि मानव विकासमा उत्तिकै महत्व छ । मानिसको खोजशक्तिले औषधि सम्भव भयो, उपचार सम्भव भयो, महामारी नियन्त्रित छ, राज्य छ । वायुयान, जलयान, थरीथरीका रोबोट, सञ्चारसाधन, यातायातका साधन, गगनचुम्बी महल, समुद्रमाथि पुल, समुद्रमुनि सुरुङ इत्यादि उदेकलाग्दा संरचना कुनै देवताको कृपाले होइन, सिर्जनशील मानव मस्तिष्कले नै सिर्जना गरेको हो । बौद्धिक क्षमता उपयोगबाट मानव जीवन सहज तुल्याउने प्रयास निरन्तर जारी छ ।
सञ्चारले संसारलाई एकीकृत बनाएको छ । ऊर्जा विकासले भौतिक उत्पादनको क्षमता बढाएको छ । प्रयोगशालाबाट जीवको वंशवृद्धि हुनथालेको छ । वनस्पतिका जातीय गुण उत्परिवर्तन गरी गुणात्मक र मात्रात्मक वृद्धि भएको छ ।
देवताको कथा सुनेको भरमा नभई सिर्जनशील मानव मस्तिष्कबाट मात्र नयाँ नयाँ आविष्कार सम्भव भएको छ । आविष्कार गर्ने मानव मस्तिष्कले देवताको सट्टा खोज र अनुसन्धान माथि विश्वास ग¥यो । यो वर्ग मानवका लागि स्रष्टा शक्ति हो । बौद्धिक सर्जकहरूका लागि सृष्टि तथा आविष्कार नै उनीहरूको क्रियाकलाप हो । मानिसका उपभोग्य वस्तुको उपलब्धता मजदुरी नै हो ।
जगत सञ्चालनका लागि शारीरिक श्रम र मानसिक श्रम बराबर आवश्यक पर्छ । दुवै श्रमको प्रतिफलबाट मात्र जगत अघि बढेको छ । मानसिक श्रम पनि मजदुरी नै हो । राष्ट्रप्रति वफादार उच्च नेता, कलाकार, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक, कर्मचारी आदि यही वर्गमा पर्छन् । यो वर्ग बौद्धिक मजदुर हो तर श्रमशील मजदुरको जगमा रहेर मात्र यो वर्गले काम गर्न सक्तछ ।
सारमा भन्नु पर्दा, सबै किसिमका मजदुरीको समान महत्व छ । शारीरिक श्रम गर्ने मजदुरहरू विकासको हरेक पक्षबाट पिछडिएका देखिन्छन् । मानव जीविकाका लागि योगदान भने यही वर्गले धेरै गरेको हुन्छ । त्यसैले मजदुरप्रति व्यक्तिगत सद्भावमात्र होइन दीर्घकालीन रूपमा शोषणरहित व्यवस्था हुनै पर्छ ।
भोजनको हरेक गाँसमा, वस्त्रको हरेक धागोमा, महलको हरेक इटामा र जीवनका हरेक पलमा मजदुरले हात र साथ दिएका हुन्छन् निःस्वार्थ भावले । देवताका लागि मन्दिर जानै पर्दैन, मजदुरमाथि मानवीय भाव राखे पुग्छ, श्रमिक मजदुरप्रति शिष्टता देखाए पुग्छ । अमुक देवताका नाममा दान गर्नुको साटो श्रमजीवी मजदुरको शोषण नगरे पुग्छ । यिनीहरू नै हाम्रा प्रत्यक्ष देवता हुन् ।
मजदुरका लागि नेताको उन्मादपूर्ण भाषण होइन, सम्मानपूर्ण जीविकाको सुनिश्चितता आवश्यक छ । दलका नेताहरूले केवल भोटको लागि श्रमिक मजदुरलाई अनेक आश्वासन बाँड्ने गरेका छन् । आश्वासनले सम्मान दिँदैन र श्रमशक्ति मुलुकबाट पलायन हुन पनि रोक्दैन ।
मजदुर बौद्धिक होओस् कि श्रमिक, मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गरेर उसलाई अड्याउने दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम अविलम्ब आवश्यक छ ।
प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०७८, बिहीबार ७ : ५५ बजे
काठमाडौँ- बलिउडका लागि पछिल्लो समय निराशाजनक रहेको छ । वर्षको